ASUS ROG Telefoonka II: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
ASUS ROG Telefoonka II: Nooca casriga ah ee casriga ah ee lagu ciyaaro
Dhowr toddobaad kadib warar xan ah, sida xulashada processor ee telefoonka, ASUS ROG Telefoonka II horey ayaa loo soo saaray si rasmi ah. Maalin ka hor jadwalka, astaanta ayaa naga tagaysa jiilka labaad ee casriga casriga ah. Waa taleefanka ciyaaraha ugu awoodda badan suuqa, isagoo qaabkan ugala wareegaya jiilkiisii ​​hore.
ASUS ROG Telefoonka II wuxuu hayaa naqshad isku mid ah tii jiilkii koowaad. Gudaha ayay ku taal meesha aan ka helno isbeddelada badankood. Shirkaddu waxay bedeshay processor-ka, batteriga waxayna nooga tagtay taleefon qurux badan oo loogu talagalay inuu awood u yeesho inuu ciyaaro ciyaaro dhaadheer markasta.
Iyadoo ay adag tahay in wax isbeddel ah lagu sameeyo naqshadeynta, iyadoo la ilaalinayo tirada ugu badan ee asalka asalka ah iyo gadaal si cad u waxyooday adduunka ciyaaraha, waxaan arki karnaa in calaamaddu ogtahay waxa ka shaqeeya suuqan. Qaybta bannaanka innagama tageyso isbeddelo badan, dhinacyada qaarkood xoogaa waa laga safeeyey, halkaasoo ay isbeddello ka jiraan gudaha.
Telefoonka ASUS ROG waxaa si rasmi ah looga hirgaliyay dalka Spain
1 ASUS ROG Qeexitaanka Telefoonka II
ASUS ROG Qeexitaanka Telefoonka II
Awoodda shaki la'aan waa muuqaalka ugu muhiimsan ee ASUS ROG Phone II. Nooca Shiinaha kama uusan fiiqin dhinacan, laga bilaabo beddelka processor-ka illaa qeexitaannada guud ee u soo bandhiga sida taleefanka loogu yeeray inuu xukumo qaybtan taleefannada ciyaaraha ah. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Sidii horeyba loogu yiqiinay toddobaad. ASUS ROG Phone II wuxuu la yimid Snapdragon 855 Plus oo ah processor. Qalabka Qualcomm, oo la soo bandhigay toddobaad ka hor uun, iyada oo ah nooc la hagaajiyay oo loogu talagalay telefoonnada ciyaaraha. Processor kaas oo u oggolaanaya awood weyn iyo waxqabadka wanaagsan ee taleefanka. Intaa waxaa sii dheer, waxay la socotaa 12 GB RAM, taas oo shaki la'aan u oggolaan doonta in loo isticmaalo ciyaaraha dhaadheer iyo dhammaan noocyada ciyaaraha.
Kaamirooyinka, astaantu waxay isticmaashaa kamarad gadaal labalaab ah, oo leh 48 MP shidma weyn iyo 13 MP xagal ballaadhan sidoo kale. Wejiga hore wuxuu ka kooban yahay hal dareere oo 24 MP ah kiiskan. Batariga ayaa ah dhinac kale oo isbadalay kiiskan, iyada oo koror muuqda lagu sameeyay awoodiisa. Shirkaddu waxay dooratay batari awooddiisu dhan tahay 6.000 mAh kiiskan ASUS ROG Telefoonka II.
Faahfaahin kale oo xiisaha telefoonka waa taas waxaan astaysto interface ka. Marka waxaan kala dooran karnaa mid u dhigma midka loo yaqaan 'Android One' ama midka ka dagaalka badan. Isticmaale kastaa wuxuu yeelan doonaa suurtogalnimadan wakhti kasta, si markaa loogu habayn karo inuu mid walba ku habboonaado. Sidan oo kale, isticmaalkeeda waxaa lagu waafajin karaa dhammaan noocyada xaaladaha.
Taariikhda bilaabida ama qiimaha ASUS ROG Telefoonka II wali ma hayno xog weli. Bandhigga rasmiga ah ayaa dhici doona berri, sidaa darteed waxaan ka ogaan doonnaa wax walba berrito oo ku saabsan taleefankan nooca ah. Marka hubaal berrito wax badan ayaan ogaan doonaa, illaa iyo hadda ay jiraan macluumaad is khilaafsan oo arrintan la xiriira. Warbaahinta qaar waxay yiraahdaan taleefanka lama furayo suuqa illaa bisha Sebtember, ma ogin inay run tahay iyo in kale.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waan iska dhagaysan doonnaa ilaa berri illaa ay xog ka helayaan soo bandhigida qaabkan. Telefoon casri ah oo loogu talagalay inuu xukumo suuqa taleefannada, taas oo shaki la'aan noqon doonta mid caan ah. Inkasta oo aan haddaba qiyaasi karno taas qiimaha taleefanka ma ahan mid raqiis ah gabi ahaanba. Waxaan rajeyneynaa inaan macluumaad ka helno qiimahaaga berrito. Immisa ayey ku kacaysaa qaabkani?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ASUS ROG Telefoonka II: Nooca casriga ah ee casriga ah ee lagu ciyaaro
Noocyo cusub oo ku saabsan Honor 9X iyo 9X Pro ayaa shaaca ka qaaday shirkadda [+ Posters]